फरार पूर्वमन्त्री प्रहरीकै संरक्षणमा यसरी बस्दा रहेछन् ! « Surya Khabar
फरार पूर्वमन्त्री प्रहरीकै संरक्षणमा यसरी बस्दा रहेछन् !
काठमाडौं । प्रहरीको रेकर्डमा पूर्वशान्तिमन्त्री विश्वनाथप्रसाद साह अपहरण घटनाका फरार आरोपित हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा उनीविरुद्ध ७५ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खोजतलासको पत्र पुगेको एक महिना नाघिसक्यो । फरार भनिएका साह भने प्रहरीकै सुरक्षामा राजधानीमै छन् ।
सिरहाको पत्रका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साहलगायतको खोजतलास गर्न पत्र सर्कुलर भइसकेको छ । तर, एक महिना बित्दा पनि आफ्नै संगठनको सदस्यको सुरक्षा घेरामा रहेका साहलाई प्रहरीले फेला पारेको छैन भन्दै आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।